Madaxweynaha Cusub Ee Puntland Iyo Nickols Kay Oo Ku Kulmay Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Wakiilka gaarka ah ee xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa maanta Garoowe kula kulmay madaxweynaha cusub ee Puntland Dr Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Cali Gaas iyo Nicholas Kay ayaa ka wada hadley waxyaabihii u danbeeyey ee Puntland iska bedalay, wada shaqeynta UNSOM iyo Puntland.
Nick Kay ayaa ugu horeyntii uga mahad celiyey shacabka Puntland sida wanaagsan ee ay u marti-sooreen una soo dhaweeyeen muddadii uu ku sugnaa Puntland, waxaana uu u sheegey madaxweynaha Puntland in Qaramada Midoobey ay ka go’antahay taageerada Shacabka Soomaaliyeed, isla markaana soo dhaweynayaan isbeddelka Puntland iyo doorashadii xalaasha ahayd ee ka dhacdey.
Madaxweynaha Puntland iyo masuulka xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ku leedahay ayaa isla soo qaadey arrimaha u horeeya ee la doonaayo in lagu talaabsado iyo kuwa la hiigsanaayo, si Puntland ay tusaale ugu noqoto Soomaaliya inteeda kale.
Kay ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha cusub wuxuuna sheegay in Qaramada Midoobay ay la shaqeyn doonto madaxweynaha cusub ee Puntland iyo maamulkiisa.
Wakiilka oo sidoo kale la kulmay odayaasha dhaqanka ayaa ku ammaanay sida ay usoo abaabuleen qabsoomidda doorashada oo u dhacday si dimuqraadiyad iyo nabadgelyo ku jirto.
Dr Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa Puntland hoggaamin doona shanta sano ee soo socota, kadib markii uu shalay ka guuleystay madaxweynihii hore Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole.